Madaxwayne dal Sudaan al bashiir ayaa u magacabay ku xigeenkiisi Raysalwasaare – WARSOOR
News Region Uncategorized
Sudan-(Warsoor )- Madaxweynaha dalka sudan Cumar Xasan Al bashiir aya u mugacabay raysalwasaare md Bakri Xasan Salax, bakri aya hada ah madaxweyne ku xigeenkiisa .
khubarada ka faaloota arimaha siyaasada sudaan aya yidhi waxay ka dhigantahay in uu soo celinaayo jagadii uu baabiayay markii uu xukunka dal ku qabsaday afganbigakula wareegay sanadkii 1989kii
marka laga hadlaayo magacaabista uu soo magcaabay raysalwasaraha waxy qayb ka tahay isbadel siyaasaded oo laga filanayay in uu ka dhaco.
waa markii ugu horeysay oo ay ka qayb galayaan mucaridka dal sudan xukumada cusub ee la soo magcabidoono.
hadaba waa kuma raysalwasaraha cusub ee sudan?
Raysalwasare Bakri Xasan Salax waa mid ka mid ah qoomiyada nupiyanka ee ka soo jeeda waqoyiga Sudan .
waa shaqsi ka mid ah saraakiishii sare ee kacaankii dal ka curtay ee u hogaaminayay al bashiir ee uu xukunka dalka uu afganbiga kula wareegay sanadkii 1989kii.
bakri waxa uu xilal muhiim ah ka soo qabtay kacaankii dalka ka dhacay isagoo soo noqoday Agaasimihi waaxda Amniga qarank sudaan ,waana shaqsiga kaliya ee ka sii hadhay dadkii kala qaybqaatay in uu talada dalka qabto Al bashiir mudo ku siman 27 sano kahor
waan ninka kaliya ee uu ku kolsoonyahay al bashiir , ee laga yaabo in uu xil dalka kala wareego mustaqbalka .
waxa uu dhashay sanadkii 1949kii , baraarintiisii waxaa uu warbarashada ku soo qaatay dal masar hal kaasi oo abihi ka shaqeynayaay , madaxweyne al bshiir aya waxa xukunka loo doortay sandkii 2015kii,waxanu xilku kaga eegyahay 2020ka,laba sanado dabdeed waxa la filaya in doorasho loo dareero taasi oo aanu ka qeyb ahyn al bashir doorashadaas dhicidoonta 2022ka .